Silika: Chinja Dhata uye Spreadsheets muPapiridzwa Kuona | Martech Zone
Svondo, July 19, 2015 Svondo, July 19, 2015 Douglas Karr
Wati wambove nespredishiti yaive neakanakisa kuunganidzwa kwedata uye iwe waingoda kungozviona - asi kuyedza uye kugadzirisa iwo akavakirwa-mukati machati mukati meExcel kwanga kwakanyanya kuomarara uye kunotora nguva? Ko kana iwe waida kuwedzera data, kuitisa, kurodha pasi uye nekugovana iwo ekuona?
Unogona ne Silk. Silk ipuratifomu yekutsikisa data.
Silks ine data pane imwe nhaurwa. Chero ani zvake anogona kutarisa Silika kuti aongorore dhata uye gadzira yakanaka yekudyidzana machati, mepu uye mapeji ewebhu. Parizvino, mamirioni emapeji eSilika akagadzirwa.
Shanyira Wepamusoro gumi nemashanu akanyanya pasocial network Silk yekuona, kugovana kana kunyangwe kupinza zvinoonekwa zvakagadzirwa kubva muunganidzwa uyu wedatha. Heano mhenyu kupamhidzirwa kwebha chati chati yemushandisi manhamba:
Dhata kubva panorama-roush.company
Gadzira magwaro anopindirana - Panzvimbo pekutumira static maPDF, maspredishiti kana marinki kubva kuGoogle Docs, shandisa Silk kugadzira saiti yakazara inofambidzana inobata vashandisi uye inovakurudzira kutamba ne data rako.
Embed yekudyidzana data chero kupi - Tora Silk yako visualizations uye uishandise pawebhu rese. Vavhare muTumblr, WordPress, uye mamwe akawanda mapuratifomu ekudhinda.
Wedzera mabhegi kuita kuti basa rako rigadzirike nepakati, chimiro, kana chero chikamu chaunosarudza. Nekuwedzera data renzvimbo, unogona zvakare kuvaka mepu
Kuisa Silk kushandisa, ini ndakatumira kunze kwedu kiyi kiyi masosi kubva Semrush uye nekukurumidza ndakagadzira visualization iyo yaindirega ndirongedze uye ndione mazwi akakosha kwandaive nematanho epamusoro uye paive netani yekutsvaga vhoriyamu… zvichinyatso kundizivisa uko kumwe kukwidziridzwa uye kusimudzira kunogona kutyaira yakawanda yakawanda traffic. Ini ndaigona kuita izvi nekurongedza uye kusefa iyo data ... asi iko kuona kwakanyatso kuiburitsa pachena!
Tags: kudhinda datadata yekutsikisa chikuvaKuona Dhiyabhorosidata visualization chikuvaharikasirika